Al-Shabaab oo Argagax galin iyo Qafaal ku haaya Shacabka degmada Jilib | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Al-Shabaab oo Argagax galin iyo Qafaal ku haaya Shacabka degmada Jilib
Al-Shabaab oo Argagax galin iyo Qafaal ku haaya Shacabka degmada Jilib
Maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab ayaa laba jibaaray dhaca iyo boobka ay u gaysanayaan Xoola Dhaqatada iyo Beeralayda deegaanada qaar, iyagoo shacabka ku boobaya Diinta Islaamka oo ay ka been sheegayaan.
Dadka Beeralayda ah ee ku nool deegaanada Miyiga ah ee degmada Jilib ayaa ka cabanaya Qafaal Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u gaysanayaan Caruurtooda si ay u dagaal galiyaan iyo boob ay ku haayaan dalagyada ay beertaan.
Mid ka mid ah Horjoogayaasha Argagixisada oo meel fagaaro ah kula hadlayay Bulshada ay si xoog ah beerahooda iyo Guryahooda ay kaga soo saareen ayaa wuxuu sheegay in loo baahanyahay inay keenaan wiilashooda iyo hantidooda si loogu dhibaateeyo shacabka.
“Wiilkaaga Ma’ahan midka aanan dagaalka ku jirin, waa inaa Dagaalka soo galisaan Wiilashiina, Sidoo kale waa inaa keentaan Xoolihiina sida Geela, Lo’da iyo Xoolaha kale oo aad haysataan, Beerihiina waxaa ka soo go’a dalagyo badan sida Sisinta, waa inaa ugu deeqdaan Islaamka.” Ayuu yiri Horjoogahaan ka tirsan Argagixisada Al-Shabaab.
Previous articleRa’iisul wasaaraha XFS oo guddoomiyay shirka horumarinya Dhaqaalaha
Next articleHowlgal maleeshiyada Al-Shabaab looga saarayo degmada Xarar-dheere oo ka socda Gobolka Mudug